Fannaaniinta Darajada Saddexaad ee Degmada - Dugsiyada Dadweynaha ee Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Kooxda Fasalka Saddexaad: Waxaa ku jira wiilal iyo gabdho fasalka saddexaad ah oo ka kala socda mid kasta oo ka mid ah lixda dugsi hoose ee ku yaal Dugsiga Minnetonka. Waxaa jira laba goobood iyo waqtiyo kala duwan oo lagu waafajiyo jadwalka qoysaska kala duwan iyo meelaha ku xeeran degmada. Fanaaniin kastaa waxay kulmaan hal saac oo tababar ah usbuucii hal mar laga bilaabo Oktoobar ilaa Maajo oo iskuulka lagu jiro. Bandhig faneed qaboobaha iyo guga ayaa ka dhacaya Xarunta Farshaxanka ee Dugsiga Sare ee Minnetonka oo ay weheliyaan kooxda kale ee heesaha degmada.
Diiwaangalinta Hobollada Fasalka 3aad
Kooxda Heesaha Fasalka Saddexaad:
Maalinta Tababarka: Isniinta
Waqtiga Tababarka: 4:15 pm-5:15 pm
Goobta Tababbarka: TBD (waxay ku taal dhinaca bari ee degmada)
Waxaa daadihinaya: Melani Schwartz
Kooxda Koowaad ee Fasalka Saddexaad:
Maalinta Tababarka: TALO
Tababbarka Goobta: Iskuulka Hoose ee Minnewashta - Qolka 140 (dhinaca galbeed ee degmada)
Waxaa daadihinaya: Lisa Skaff iyo Becky Asche
Riwaayado ayaa ka dhacaya Xarunta Farshaxanka ee Dugsiga Sare ee Minnetonka oo ku taal Marxaladda Weyn. Riwaayadaha waxaa ka muuqda koox-kooxeedyada darajada 3-aad, iyo sidoo kale fasalka 4-iyo-6aad ee Muhiimka ah iyo Xulista Xullada.
1. Kala hadal qoyskaaga ku biirista.
2. Dhagsii xiriiriyeha buug-gacmeedka ee ku yaal bogga boggan oo hubi ku celcelinta iyo taariikhaha riwaayadaha si aad u hubiso inaad goobjoog ka noqon karto oo aad xubin ka noqon karto kooxda heesaha.
3. Hubso inaad haysato gaadiid aad ku heli karto tababar. Basaska lama siinayo, si kastaba ha noqotee, qoysas badan ayaa u arkaa in gawaarida gawaarida si fiican u shaqeeyaan.
4. Dhagsii xiriirka hoose si loogu gudbiyo foomka diiwaangelinta khadka tooska ah.
Khidmadda diiwaangelinta kooxda
Kooxda Heesaha Fasalka 3aad WAA BILAASH!
Xaalad jiro ama khilaaf kale oo lama huraan ah, fadlan ku wargeli agaasimaha ilmahaaga emayl. Haddii heesaha uu seego seddex tababar oo simistarka ah, waxay ubaahan doonaan inay jadwal u sameystaan agaasimaha. Haddii heesaha uu seego wax ka badan seddex xilli-dugsiyeed, waxaa laga codsan doonaa inaysan ka soo qayb galin xafladda ama bandhig faneedka xiga. Tababar kasta waa muhiim! Markuu heestaadu waayo hal ku celcelin, waxay hoos u dhigeysaa horumarka kooxda heesaha oo dhan, taasoo saameyn ku yeelata tayada iyo tirada muusigga aan baran karno. Haddii heesaagu u baahan yahay inuu goor hore baxo fadlan keen warqad qoraal ah ama emayl ujeeddooyin nabadgelyo darteed.
Isgaarsiinta ka socota agaasimayaasha waxay ku imaan doontaa emayl ahaan. Waxaan abuuri doonnaa liistada qaybinta emaylka si aan u dirno farriimo toos ah iyo warar. Waxaan marwalba adeegsan doonnaa ikhtiyaarka nuqul indhoolaha ah si aan macluumaadka uga dhigno kuwa qarsoodi ah. U hubso inaad calaamadeyso sanduuqaaga qashinka ah oo aad ku darto emaylkeena buugga cinwaankaaga.
Waxaa jiri doona waqtiyo sanadka gudihiisa ah oo aan u baahan doonno caawimaad waalid. Ogeysiisyada fursadaha iskaa wax u qabso waxaa lagu soo diri doonaa emayl ka dib marka ardaygaaga la diiwaangeliyo.
Dhig / Soo Qaad (Halka Loogu Taagan Yahay Kaliya Kaliya)
Fannaaniinta waa in laga soo dajiyaa albaabka 7W (wareegga soo-qaadista waalidka) ugu dambeyn 4:05 pm Kormeer lama siinayo ilaa 4:05 pm
Markaad gaari wadid, isticmaal albaabka “4” oo raac jihada fallaaraha gaduudka ah ee khariiddada socodka taraafikada. Fannaaniinta waxaa laga qaadayaa 5:15 pm isla albaabka (7W).
Haddii aad dooratid inaad dhigatid goobta baska, fadlan ka deg gaarigaaga oo u soco cunuggaaga una kaxee albaabka 7W sababo ammaan awgood.
3RD GRADE "ANCHOR" HOOSKII XUKUNKA
Dugsiyada Hoose ee Deephaven & Scenic Heights
Ku hees heeso xiiso leh
Samee saaxiibo cusub
Baro sida loo noqdo heesaaga ugu fiican
Ku hees Heesta Qaranka munaasabadaha isboorti
Ku hees inta lagu jiro xilliga qaboobaha iyo xilliga qaboobaha
Dalxiiska Dugsiga Hoose ee Dalxiiska (waxaad seegi doontaa maalin dugsi ah inaad la heesato asxaabtaada)
Xisbiyada koox-kooxeedka xiisaha leh (xafladda kala-baxa jiilaalka iyo xafladda isboortiga)
Maxay ardaydu sida ugu fiican uga helaan inay ka mid noqdaan kooxda heesta
Sameynta saaxiibo cusub, ku heesida heeso waaweyn, iyo yeelashada agaasimayaal kooxeedyo cabsi leh
Barashada heeso cusub oo qabow
Hagaajinta codkooda heesaha
Wax u qabashada dad badan
Dugsiga Hoose /
Kooxda Kooxda /